कताको दर्शन राम्रो ? « News of Nepal
कताको दर्शन राम्रो ?
हाम्रा नेताका लागि ठूलो राजनीतिक तीर्थस्थल हो भारत । यता ठूलो राजनीतिक खटपट त के सामान्य खटपट भयो वा हुने संकेत मात्रै देखियो भने पनि नेता तीर्थस्थल पुगिहाल्छन् । यस्तो धार्मिक भ्रमण वर्षौदेखि हुँदै आएको छ ।
‘सानैदेखि लाग्या बानी’ भनेझै राणा शासनदेखि लाग्या बानीले राम्रै निरन्तरता पाइरहेको छ ।
नेकपाका नेता प्रचण्ड भोली बिहीवार उतैको तीर्थस्थल जाने तयारीमा जुट्या धरहराले सुन्यो । उनले पक्कै पनि त्यहाँका गुरुहरुबाट आर्शिवाद लिन्छन् नै, आर्शिवाद के कस्तो हुने हो भन्ने खुलदुली धरहरालाई मात्रै होइन, धेरैजसो नेपालीको चासो बन्ने निधो छ । यता र उताका नेतामा फरक के छ भने उताका नेता चाहिँ यताको धार्मिक यात्रामा विश्वास गर्छन् ।
नेपाल आउँदा आफ्नो राजनीतिक मिसन पुरा हुन्छ भन्ने उनलाई विश्वास लाग्न थाल्या छ । गत साता मोदी आए गए । उनी पछि–पछि भारतीय प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता राहुल आए । पशुपतिको जात्रा सिद्राको व्यापार भने झैं बिमस्टेकका लागि आएका मोदी पशुपति दर्शन गर्न गए, राहुलले पनि पशुपतिमा राम्रै आर्शिवाद मागे । पशुपति दर्शनको मुख्य उद्देश्य थियो, २०१९को अप्रिल र मे महिनामा हुने सत्रौ लोकसभाको चुनाव ।
दुवैले दिल खोलेर पशुपतिसँग आर्शिवाद माग्दै भने–‘प्रभु जसरी हुन्छ चुनावमा मैले र मेरो पार्टीले सम्मान जनक छलाङ मार्नै पर्छ, आर्शिवाद पाऊ ।’ राहुल यस्तै आर्शिवाद माग्न काठमाडौं हुँदै कैलाश–मानसरोवरको यात्रामा लाग्या छन् । लौ जवाफ पाऊ पाठकवृन्द कुन चाहिँ धार्मिकस्थल बलियो ?